अर्थ Archives - Ekarmachari
सरकारले यो बर्ष केही व्यवसायमा कर नलाग्ने प्रावधान गरेको छ । कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाको रुपमा दर्ता गरी कृषि व्यवसाय गरी प्राप्त भएको आयमा कर लाग्दैन । सहकारी संस्था वा संघको आयमा तथा वितरण गर्ने लाभांशमा पनि कर लाग्नेछैन । कृषि वा वन पैदावारमा आधारित सहकारी संघसंस्था, कृषि औजारको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कर […]
९ असार २०७८, बुधबार १३:११ June 23, 2021
कुन प्रदेशको बजेटमा कर्मचारीलाई के- के सुविधा ?
हिजो सातै प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार सातवटै प्रदेशहरुले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्ष २०७८ ७९ को बजेट बक्तव्य सार्वजनिक गरेका हुन् । जसअनुसार १ नम्बर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै सिको गर्दै प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई १० दिनको पर्यटन काज बिदा दिने पनि भएको छ । त्यहाँका आर्थिक मामिला मन्त्री टंक आङ्बुहाङले […]
२ असार २०७८, बुधबार १५:३७ June 16, 2021
राष्ट्र बैंकमा १३ करोडको गाडी सुविधा,करोडौं कर छलीको आशंका
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाको मौका छोपेर गभर्नर,डेपुटी गभर्नर र १७ जना कार्यकारी निर्देशकले अवकाशपछि घर लैजान पाउने गरी १३ करोड रुपैयाँको गाडी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । चैत तेस्रो साता बैंक सञ्चालक समितिले गरेको उक्त विशेष सुविधाको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकले निषेधाज्ञाबीच हुण्डाइको १३ थान गाडीसमेत खरिद गरेको छ । डेपुटी […]
१ असार २०७८, मंगलवार १०:५५ June 15, 2021
बर्षदिनको अन्तरालमा खानेतेलको मूल्य दोब्बरले बृद्धि :-किन निरिह भयो सरकारी संयन्त्र ?
कोरोना कहर र लकडाउनको समयमा खाने तेलमा कालोबजारी भैरहेको छ । लकडाउन र कोरोना कहर भएको मौका छोपी व्यवसायीहरुले खाने तेलको मूल्य पछिल्लो एक बर्षमा झण्डै दोब्बर भन्दा बढीले बृद्धि गरेका छन् र उपभोक्ता दोहोरा मारमा परेका छन् । जस्तो पछिल्लो एक बर्षको अवधिमा मात्र सूर्यमुखी तेलको मूल्य झण्डै ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। […]
३० जेष्ठ २०७८, आईतवार १२:४७ June 13, 2021